အကောင်းဆုံးစျေးပေါ ဖုန်စုပ်စက် 2022- ဝယ်ယူမှုလမ်းညွှန်နှင့် မယုံနိုင်လောက်အောင် ကမ်းလှမ်းချက်များ
2 နှင့် 1
အလိုရှိ စျေးပေါတဲ့ ဖုန်စုပ်စက် ဝယ်ပါ။? ဖုန်စုပ်စက်ဈေးကွက်သည် နှစ်များတစ်လျှောက် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ စျေးကွက်တွင် ဖုန်စုပ်စက်များ ရွေးချယ်မှု မည်ကဲ့သို့ ကြီးထွားလာသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့မြင်နိုင်ပါပြီ။ ရရှိနိုင်သော အမှတ်တံဆိပ်နှင့် အမျိုးအစားများ ပိုများလာပါသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးတွင် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး ကိစ္စအများအပြားတွင် ၎င်းတို့တွင် ပိုမိုတိကျသောအသုံးပြုမှုများရှိသော်လည်း ရွေးချယ်မှုမှာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည်။ ဒါကြောင့် သုံးစွဲသူတွေက ရွေးချယ်စရာတွေ ပိုရှိလာပါတယ်။
ဖုန်စုပ်စက်အသစ်ဝယ်သောအခါ ရွေးချယ်မှု ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ စားသုံးသူတိုင်း လိုချင်တဲ့ အသွင်အပြင် နှစ်ခုရှိပါတယ်။ အရည်အသွေးပြည့်မီသော ဖုန်စုပ်စက်ကို လိုချင်သော်လည်း စျေးလည်းမကြီးပါ။ ဒါဟာ အများအားဖြင့် လူအများစုရဲ့ ဆန္ဒပါ။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား စျေးသက်သာသော ဖုန်စုပ်စက်များ ရွေးချယ်မှုဖြင့် အောက်တွင် ထားခဲ့သည် ။
၎င်းတို့အားလုံးသည် အရည်အသွေးပြည့်မီသော မော်ဒယ်များဖြစ်ကြသော်လည်း စျေးနှုန်းများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ ဖုန်စုပ်စက်ကို သက်တမ်းတိုးခြင်းသည် အလွန်အကျွံအားထုတ်မှုဟု မထင်ပါ။ ဒီမော်ဒယ်တွေအားလုံးကို အောက်မှာ ပြောပြထားပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မော်ဒယ်များစွာကို ရွေးချယ်ပြီးပါပြီ။ ၎င်းတို့အားလုံးသည် သုံးစွဲသူများအတွက် ပိုမိုလက်လှမ်းမီသောစျေးနှုန်းဖြင့် ထင်ရှားပေါ်လွင်သော မော်ဒယ်များဖြစ်သော်လည်း အရည်အသွေးကို စွန့်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ဤမော်ဒယ်များတစ်ခုစီ၏ အသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူ ဇယားတစ်ခုရှိသည်။ စားပွဲအပြီးတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့တစ်ဦးချင်းစီအကြောင်း အသေးစိတ်ကို ပိုမိုအသေးစိတ်ပြောပြပါသည်။
ဤအချက်အလက်များကြောင့် သင်ဝယ်လိုအားအရှိဆုံးမော်ဒယ်ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှင်းလင်းသော အကြံဥာဏ်ကို သင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Lefant F1 စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်...
Taurus အမိမြေ အဆုံးမဲ့ -...
Cecotec မပါသော ဖုန်စုပ်စက်...
Rowenta Swift ပါဝါ...
AEG LX7-2-EB-P ဖုန်စုပ်စက်...
2 အကောင်းဆုံးစျေးပေါသော ဖုန်စုပ်စက်များ
2.2 Ecovacs Debot Ozmo 900
2.3 Cecotec Dustick လွယ်ကူသော Conga
2.5 ကာချာ WD3
2.7 AmazonBasics Bagless Canister ဖုန်စုပ်စက်
2.8 VicTsing ကြိုးမဲ့လက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက်
2.9 Rowenta လေတပ် Extreme RH8828
3 aspirator အမျိုးအစား
3.72နှင့် 1
4 အကောင်းဆုံး ဖုန်စုပ်စက် အမှတ်တံဆိပ်များ
4.3 Bosch ရဲ့
4.5 Dyson ဟာ
5 ဖုန်စုပ်စက်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
5.5 မင်းကို ဘယ်အရာကမှ ယုံမှာမဟုတ်ဘူး?
ဤဖုန်စုပ်စက်တစ်ခုစီ၏ အရေးကြီးဆုံးသတ်မှတ်ချက်များကို ပြသပြီးသည်နှင့်၊ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤမော်ဒယ်လ်တစ်ခုစီ၏အကြောင်းကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ဆက်လက်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။ ဤနည်းဖြင့် ဤမော်ဒယ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်အကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့် မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင် အဲဒါကို ချက်ချင်းသိနိုင်မှာပါ။
စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်အမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်သည့်ကဏ္ဍတွင် နာမည်ကြီးသည့် Cecotec မှ ဤစက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်ဖြင့် စာရင်းဖွင့်ပါသည်။ စက်ရုပ်အားလုံးကဲ့သို့ပင် ၎င်းသည် အလွန်သက်တောင့်သက်သာရှိသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် မော်ဒယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရမှာက ပရိုဂရမ်နဲ့ အိမ်ရဲ့ ကြမ်းပြင်တွေကို စပြီး သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရတာပါ။ ၎င်းသည် လေးကြိမ်သန့်စင်ပြီး စုစုပေါင်း သန့်ရှင်းရေးမုဒ်6ခုပါရှိသည်။ ၎င်းသည် ဖုန်စုပ်စက်သာမက စုတ်တံနှင့် တံမြက်စည်းများပါရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်သန့်ရှင်းရေးကို ပြီးပြည့်စုံအောင် လုပ်ဆောင်ပါ။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည်ကြမ်းပြင်အမျိုးအစားအားလုံးတွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။
၎င်း၏နည်းပညာကြောင့် အိမ်တစ်ဝိုက်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည့်အခါ ပရိဘောဂများ၊ လူများ၊ ထောင့်များနှင့် လှေကားမှ ပြုတ်ကျမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ပြန်ထိုင်ပြီး စက်ရုပ်ကို ၎င်း၏အလုပ်ကို လုပ်ခွင့်ပေးနိုင်သည်။ သူ့မှာ မိနစ် 160 ကြာကြာခံနိုင်တဲ့ ဘက်ထရီပါရှိပါတယ်။ ဘက်ထရီကုန်ခါနီးအချိန်တွင် စက်ရုပ်သည် အပြည့်အဝအားပြန်သွင်းရန် ၎င်း၏အခြေစိုက်စခန်းသို့ တိုက်ရိုက်ပြန်သွားပါသည်။ အဲဒီတော့ အဲဒါကို စိတ်ပူစရာ မလိုဘူး။ ၎င်းတွင် စွမ်းရည်မြင့် တိုင်ကီပါရှိပြီး၊ ၎င်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ဗလာကျင်းရန် မလိုအပ်ဘဲ တစ်အိမ်လုံးကို ဖုန်စုပ်နိုင်စေပါသည်။
ဇကာတစ်ခုအနေဖြင့် HEPA စစ်ထုတ်မှုပါရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို အလွယ်တကူ သန့်ရှင်းနိုင်စေပါသည်။ ပုတ်အောက်ကို ထည့်ပြီး ခြောက်အောင်ထားပါ။ ဒါကြောင့် သန့်ရှင်းပြီး ပြန်သုံးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား filter များပေါ်တွင် ငွေစုနိုင်စေသော အလွန်အဆင်ပြေသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤစက်ရုပ်သည် ဆူညံခြင်းမရှိသောကြောင့် ထင်ရှားသည်။ စက်ရုပ်တွင် စုတ်တံများစွာ၊ အားသွင်းစခန်း၊ အဝေးထိန်းခလုတ်နှင့် အဒက်တာများ အပါအဝင် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါရှိသည်။
Ecovacs Debot Ozmo 900
ဤစာရင်းတွင် တစ်ခုတည်းမဟုတ်သော်လည်း၊ ဤ Ecovacs ကြမ်းပြင်သန့်စင်ခြင်း၏ အထူးခြားဆုံးအင်္ဂါရပ်တစ်ခုမှာ Alexa နှင့် မိုဘိုင်းအက်ပ်လီကေးရှင်းများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကို အချိန်တိုင်းသိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတွင် အခြားသော ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး အမျိုးအစားလည်း ပါရှိပြီး၊ ဤအခြေအနေတွင် သင်သွားမည့်နေရာကို သိနိုင်စေမည့် လေဆာဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးသည့် Smart Navi 3.0 Navigation ငါတို့အိမ်မြေပုံဖန်တီးပါ။.
Ecovacs Debot Ozmo 900 -...
ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ECOVACS အက်ပ်ဖြင့် virtual barriers များကို မိုဘိုင်းမှ ဖန်တီးနိုင်သည်။ စက်ရုပ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိသည့်နေရာများကိုသာ သန့်ရှင်းစေရန်အတွက် ဦးစားပေး သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့ရန်နေရာများဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိရာ၊ မည်သို့နှင့် မည်သည့်အချိန်တွင် သန့်ရှင်းကြောင်း သေချာစေရန် ၎င်း၏ သန့်ရှင်းရေးမုဒ်လေးခုထဲမှ တစ်ခုကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
Cecotec Dustick လွယ်ကူသော Conga
ဒုတိယနေရာမှာတော့ ဒီမော်ဒယ်ကို 2-in-1 တံမြက်စည်း ဖုန်စုပ်စက် ဖြစ်ပေမယ့် တံဆိပ်တစ်ခုတည်းကနေ ရှာတွေ့တာပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ ထုတ်ယူနိုင်တဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက် ပါ၀င်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ နေရာတွေလိုမျိုး ပိုတိကျတဲ့ နေရာတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ ဆိုဖာ သို့မဟုတ် ကားထိုင်ခုံများ။ ယင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အိမ်၏ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော သန့်ရှင်းရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် စွမ်းအားများစွာပေးသည့် ဆိုင်ကလုန်းနည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် ထင်ရှားသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပါဝါမဆုံးရှုံးကြောင်း ဆိုလိုသည်။ သုံးစွဲသူများအတွက် စိတ်အေးချမ်းသာမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော အရာတစ်ခု။
၎င်းသည် ပေါ့ပါးသော မော်ဒယ်ဖြစ်ပြီး အိမ်တွင်သုံးရန် အလွန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည် အလေးချိန်အနည်းငယ်သာရှိပြီး ၎င်းကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေပါသည်။ အထူးသဖြင့် လှေကားပါသောအိမ်ရှိလျှင် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ သယ်ယူရန် အဆင်မပြေပါ။ ဤမော်ဒယ်သည် ကေဘယ်ကြိုးများနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး ၎င်း၏ အတိုင်းအတာမှာ6မီတာရှိသည်။ ဒါကြောင့် အဆက်မပြတ် ပလပ်ဖြုတ်နေစရာမလိုဘဲ အိမ်တဝိုက်နဲ့ အခန်းတွေကြားမှာ အဆင်ပြေပြေ ရွေ့ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ ဤတံမြက်စည်းဖုန်စုပ်စက်သည် သစ်သားကြမ်းပြင်များအပါအဝင် မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားအားလုံးတွင် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။
၎င်းတွင် 1 လီတာဆံ့သောသိုက်တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ အိမ်တစ်ခုလုံးကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် လုံလောက်သောစွမ်းရည်ကိုပေးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ တိုင်ကီကို ထုတ်ယူခြင်းသည် အလွန်ရိုးရှင်းပြီး ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့ သန့်စင်သည့်နည်းဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှာ ရိုးရှင်းသော filter များနှင့်လည်း ဖြစ်ပွားသည်။ ၎င်းသည် HEPA စစ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ကို သန့်ရှင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဆူညံသံနှင့်ပတ်သက်၍၊ ၎င်းသည် သတိအရှိဆုံးမဟုတ်သော်လည်း ၎င်းသည် သာမန်ဖုန်စုပ်စက်ကဲ့သို့ ဆူညံသံပမာဏကို ထုတ်ပေးသည်။ နေရာလွတ်မရှိသောကြောင့် သိမ်းဆည်းရန် အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ ဤဖုန်စုပ်စက်တွင် အပို နော်ဇယ်အချို့ ပါရှိသည်။
တတိယနေရာမှာတော့ အနည်းဆုံးတော့ ဒီဇိုင်းပိုင်းအရ ဒီပိုရိုးရာ Rowenta ဖုန်စုပ်စက်ကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရတယ်။ ၎င်းသည် ကြီးမားသော စွမ်းအားနှင့် စုပ်ယူမှုစွမ်းအားကိုပေးသည့် ဆိုင်ကလုန်းနည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဤပါဝါကို မဆုံးရှုံးပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို သက်တောင့်သက်သာအရှိဆုံးဖြင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ လူများစွာအတွက် အရေးကြီးသော အာမခံချက်ဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားအားလုံးတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော်လည်း အထူးသဖြင့် မာကျောသောကြမ်းပြင်များ (ကျောက်၊ ကြွေပြား...) တွင် ကောင်းမွန်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်တွင် ထိုကြမ်းပြင်အမျိုးအစားရှိပါက၊ ၎င်းတို့အတွက် အကောင်းဆုံး ဖုန်စုပ်စက်ဖြစ်သည်။
Rowenta RO3753 ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်...
၎င်းသည် 1,5 လီတာဆံ့သော tank ဖြင့်အလုပ်လုပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်လွယ်ကူစွာအလွတ်ရနိုင်သည်။ ထို့အပြင် အိမ်တစ်အိမ်လုံးကို ပြဿနာမရှိဘဲ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် လုံလောက်သော ပမာဏဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် HEPA Filter ပါရှိပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ၎င်းကို ဆေးကြောနိုင်ပါသည်။ အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ Filter ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင်တော့ အခြောက်ခံပြီး ဖုန်စုပ်စက်ထဲမှာ ပြန်ထည့်လိုက်ပါ။ ဤအရာအားလုံးသည် စုပ်ယူမှုစွမ်းအား မဆုံးရှုံးစေဘဲ။ Rowenta ဖုန်စုပ်စက်သည် ကြိုးတပ်ထားပြီး၊ ၎င်းတွင် 6,2 မီတာကြိုးရှိသည်။ ဤအရာက ကျွန်ုပ်တို့အား အိမ်တစ်ဝိုက်တွင် လွယ်ကူစွာ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်စေပါသည်။
အလေးချိန် 6,8 ကီလိုဂရမ်ရှိသော်လည်း ၎င်းသည် အိမ်တစ်ဝိုက်တွင် ကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူသော မော်ဒယ်ဖြစ်သောကြောင့် ပုံသဏ္ဍာန်ကြောင့် အရူးမခံပါနှင့်။ ဘီးများပါသော ဒီဇိုင်းကြောင့် ၎င်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော မိုဘိုင်းဖုန်စုပ်စက်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ သိုလှောင်ရန်နေရာများအလွန်အကျွံမယူသောကြောင့်၎င်းကိုသိမ်းဆည်းရန်နေရာရှာရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည် သာမန်ဖုန်စုပ်စက်နှင့် တူညီသော ဆူညံသံကို ထုတ်ပေးသောကြောင့် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍ အံ့သြစရာမရှိပါ။ အလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အသံမဟုတ်ပါ။
စတုတ္ထနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ၎င်းကို မတူညီသော အခြေအနေများစွာတွင် သုံးနိုင်သော်လည်း စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဖုန်စုပ်စက်အဖြစ် အဓိကအသုံးပြုမည့် ဤဖုန်စုပ်စက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိရသည်။ သို့သော်၊ ၎င်းသည် အထူးကောင်းမွန်သော စုပ်ယူမှုစွမ်းအားကို ပေးစွမ်းနိုင်သော အလွန်အားကောင်းသော မော်ဒယ်လ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် အထူးထင်ရှားသည်။ ဤနည်းဖြင့် စုဆောင်းထားသော အညစ်အကြေးအားလုံးကို လွယ်ကူစွာ ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် စိုစွတ်သောအညစ်အကြေးများနှင့်လည်း အလုပ်လုပ်သောကြောင့် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား သမားရိုးကျ ဖုန်စုပ်စက်ထက် များစွာပိုမိုအသုံးပြုနိုင်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် စွယ်စုံရဖြစ်သည်။
ကာချာ MV3ဖုန်စုပ်စက်...
၎င်းတွင် ကြီးမားသော စွမ်းရည်ရှိသော တိုင်ကီပါရှိသောကြောင့် အညစ်အကြေးများ ပိုမိုစုပုံလာသောကြောင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား မိနစ်အနည်းငယ်တိုင်း ဗလာကျင်းစရာမလိုဘဲ ပိုကြီးသောနေရာများကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် ရွေးချယ်ခွင့်ကို ပေးပါသည်။ ဒါကြောင့် သန့်ရှင်းရေးက နည်းလမ်းတိုင်းက ပိုထိရောက်တယ်။ ဖုန်စုပ်ခြင်းအပြင်၊ ၎င်းတွင် အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သော blowing function ပါရှိပါသည်။ ဒါမှ ပိုပြီး နက်နဲတဲ့ သန့်ရှင်းရေးကို လုပ်နိုင်မှာပါ။
၎င်းသည် 7,66 ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိသောမော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်၊ ဒီနံပါတ်တွေရှိနေပေမဲ့၊ အဲဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့ မော်ဒယ်တစ်ခုပါ။ ထို့အပြင်၎င်း၏လေးဘီးဒီဇိုင်းကြောင့်၎င်းသည်အလွန်မိုဘိုင်းနှင့်အလွန်တည်ငြိမ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုနေစဉ် အချိန်မရွေး ပြုတ်ကျခြင်း သို့မဟုတ် ပြုတ်ကျခြင်း မရှိပါ။ အဲဒီတော့ သန့်ရှင်းရေးကိုပဲ ဂရုစိုက်တယ်။ အရှည်4မီတာရှိသော ကေဘယ်ကြိုးတစ်ခုပါရှိသည်။ ၎င်းသည် အရှည်ဆုံးမဟုတ်သော်လည်း လုံလောက်သော ရွေ့လျားနိုင်မှုကို ပေးသည်။
ဤ Braava 390t သည် အခန်းကျယ်များစွာကို သန့်ရှင်းစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်းတွင် သုံးဆ ပွတ်တိုက်ခြင်း ပါရှိသည်။ ဤစက်ရုပ်ငယ်လေးသည် ၎င်း၏တည်နေရာကို ခြေရာခံနိုင်စေရန် ကူညီပေးသည့် လမ်းကြောင်းပြကွက်များပါရှိသော ၎င်း၏ iadapt 2.0 ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အညစ်အကြေးများ၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏ဆံပင်နှင့် ဓာတ်မတည့်မှုများကို ဖယ်ရှားလိုပါက သို့မဟုတ် 33m² အထိ ပွတ်တိုက်ရန်အတွက် ၎င်း၏ triple pass ကို အသုံးပြု၍ pass တစ်ခုတည်းကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
iRobot Braava 390t စက်ရုပ်...
အခြားအင်္ဂါရပ်များအနေနှင့် ၎င်းတွင် microfiber အထည်4ခုပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့အနက် နှစ်ခုမှာ ပွတ်တိုက်ရန် နှင့် နှစ်ခုကို သုတ်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကြမ်းတိုက်ဆေးခြောက်နိုင်ပါတယ်။.
AmazonBasics Bagless Canister ဖုန်စုပ်စက်
အောက်ဖော်ပြပါ မော်ဒယ်သည် အလွန်ထိရောက်ပြီး ပြဿနာကင်းသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် ထင်ရှားသည့် သမားရိုးကျ ဖုန်စုပ်စက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အိမ်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန် ပိုမိုဂန္ထဝင်မော်ဒယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကြမ်းပြင်အမျိုးအစားအားလုံးတွင် ဖုန်စုပ်နိုင်ပြီး လုံလောက်သောပါဝါရှိသည်။ ၎င်းသည် စာရင်းတွင် အစွမ်းထက်ဆုံးမဟုတ်သော်လည်း မည်သည့်အချိန်တွင် ဖုန်စုပ်ခြင်းမပြုဘဲ မည်သည့်အညစ်အကြေးမှ မချန်ထားပေ။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ၎င်း၏တာဝန်ကို အချိန်တိုင်း ပြီးပြည့်စုံအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
1,5 လီတာ ဆံ့သော တိုင်ကီပါရှိပြီး ရေပြည့်သည်အထိ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဤသိုက်ကို ထုတ်ယူခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းသည် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ဒါကြောင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု သိပ်မလိုအပ်ပါဘူး။ ၎င်းတွင်ပါရှိသော HEPA စစ်ထုတ်မှုတွင် အလားတူကိစ္စရပ်မျိုးဖြစ်သည်။ အညစ်အကြေးတွေ အများကြီး စုပုံလာတာကို သတိပြုမိတဲ့အခါ ရေစို၊ အခြောက်ခံပြီး ပြန်သုံးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဤနည်းဖြင့် ၎င်းသည် ပထမနေ့ကဲ့သို့ အမြင့်ဆုံးစုတ်ယူမှုစွမ်းအားကို ပြန်လည်ရရှိစေသည်။ အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်း။
၎င်းသည်ကေဘယ်ကြိုးများနှင့်အလုပ်လုပ်သည်၊ ဤကိစ္စတွင်၊ ၎င်းတွင်5မီတာကြိုးရှိသည်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ကို အိမ်တစ်အိမ်မှာ သက်တောင့်သက်သာ လှုပ်ရှားနိုင်စေပြီး လွတ်လပ်မှုများစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ အလေးချိန်အရ၊ ဤမော်ဒယ်သည် 4,5 ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းသည် အလေးဆုံးသော ဖုန်စုပ်စက်များထဲမှ တစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့် လှေကားထစ်တက်ရပါက အိမ်တစ်ဝိုက်သို့ အလွယ်တကူ သယ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဘီးများပါသော ဒီဇိုင်းကြောင့်၊ ၎င်းသည် အလွန် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ပူပြီး အချိန်တိုင်း သယ်ဆောင်သွားရန် မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည် သမားရိုးကျ ဖုန်စုပ်စက်ကဲ့သို့ ဆူညံသံကို ထုတ်ပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤမော်ဒယ်တွင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်။
အဆုံးစွန်သောနေရာတွင် ဤလက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့သည်။ အရွယ်အစား လျှော့ချထားသော ဖုန်စုပ်စက်နှင့် ၎င်းကို သာမန်ဖုန်စုပ်စက် မရောက်နိုင်သော နေရာများတွင် အသုံးပြုရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဆိုဖာပေါ်တွင် သို့မဟုတ် ကားထိုင်ခုံများတွင် အသုံးပြုရန် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းရေးသည် အနည်းငယ်ပိုရှုပ်ထွေးပြီး ပိုမိုတိကျမှုလိုအပ်သော ဆိုဒ်များ။ ဤပုံစံကြောင့် ၎င်းတို့ကို အမြဲသန့်ရှင်းနေစေရန် ဤနေရာများသို့ ရောက်ရှိရန် ပိုမိုလွယ်ကူမည်ဖြစ်သည်။
သေးငယ်တဲ့မော်ဒယ်အတွက်ပါဝါအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရှုပ်ထွေးဆုံး အညစ်အကြေးတွေနဲ့တောင် ပြီးအောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဆိုဖာက အမြဲတမ်း တောက်ပြောင်နေလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် အလေးချိန်အလွန်နည်းသောကြောင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး ရိုးရှင်းပါသည်။ ဤနေရာများတွင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်မှာ အမြဲမလွယ်ကူသောကြောင့်၊ ၎င်းသည် အလွန်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော၊ များစွာလည်း အထောက်အကူပြုပါသည်။ ဤမော်ဒယ်သည် ကြိုးများမပါဘဲ အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့အားသွင်းနိုင်သည့် မိနစ် 30 အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သော ဘက်ထရီပါရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အချိန်မရွေး အလွတ်ရနိုင်သော သိုက်တစ်ခုပါရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်း၏သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ပါဝင်သော filter နှင့်အတူတူပင်။ ၎င်းသည် ဆေးကြောနိုင်သော filter တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပါဝါအနည်းငယ်ဆုံးရှုံးသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့သောအခါ၊ နှိပ်ပြီး အောက်ရှိ filter ကိုဆေးကြောကာ ခြောက်သွားအောင် ပြန်ထည့်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းသည် လုံးဝဥဿုံ အလုပ်ဖြစ်ပြန်သည်။ ၎င်းတွင် မတူညီသော မျက်နှာပြင်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် နော်ဇယ်များကဲ့သို့သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အများအပြားပါဝင်ပါသည်။
Rowenta လေတပ် Extreme RH8828
နောက်ဆုံးနေရာ၌ ဤ Rowenta တံမြက်စည်း ဖုန်စုပ်စက်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့သည်။ ၎င်းသည် အလွန်အစွမ်းထက်သောကြောင့် အံ့သြစရာကောင်းသော မော်ဒယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရှိ ဖုန်မှုန့်များနှင့် အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ၎င်း၏စုတ်တံကြောင့် မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားအားလုံးတွင် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်တွင် သစ်သားကြမ်းပြင်များရှိလျှင်လည်း စိတ်ပူစရာမလိုဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ထိရောက်ပြီး ကြာရှည်ခံသော သန့်ရှင်းရေးကို အာမခံပါသည်။
ဤမော်ဒယ်သည် ကြိုးများမပါဘဲ အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းတွင် 45 မိနစ်အကွာအဝေးရှိသောဘက်ထရီပါရှိသည်။ တစ်အိမ်လုံးကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ အချိန်ပါ။ ဘက်ထရီကုန်သွားသည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ အားသွင်းထားလိုက်သည်။ အားအပြည့်သွင်းရန် ရှစ်နာရီခန့်ကြာသည်၊ ၎င်းသည် အလွန်ကြာနိုင်သည်။ ဒါကြောင့် ညဘက်မှာ အမြဲတမ်း အားသွင်းတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနက်မိုးလင်းရင် အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ အသင့်ပြင်ထားပါ။ ဤမော်ဒယ်တွင် 0,5 လီတာဆံ့သော ဖြုတ်တပ်နိုင်သော tank ပါရှိသည်။
၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်သော HEPA filter တစ်ခုပါရှိသည်။ ဒါကြောင့် ပုတ်တံအောက်မှာ ရေစွတ်ပြီး အခြောက်ခံပြီး ပြန်တပ်ရပါမယ်။ ဤကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပထမနေ့ကဲ့သို့ ဖုန်စုပ်စက်ကို ပြန်လည်ခံစားနိုင်ကာ ကြီးမားသောစွမ်းအားနှင့် တိကျမှုဖြင့် ဖုန်စုပ်ပေးပါသည်။ ဆူညံသံနှင့်ပတ်သက်၍၊ ၎င်းသည် နှောင့်ယှက်သောဆူညံခြင်း သို့မဟုတ် ခေါင်းကိုက်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း၊
ကျွန်ုပ်တို့ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ယနေ့ခေတ်တွင် ရရှိနိုင်သော ဖုန်စုပ်စက် အမျိုးအစားများစွာရှိပါသည်။ လူတစ်ဦးစီတွင် အချို့သောအခြေအနေများအတွက် ၎င်းတို့ကို ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးသည့် ၎င်း၏ထူးခြားချက်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သော သို့မဟုတ် ရှာဖွေနေသည့် ဖုန်စုပ်စက်အမျိုးအစားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရန်မှာ အဆင်ပြေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေမှုကို ပိုမိုတိကျစေမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါ ဖုန်စုပ်စက် အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးအကြောင်း သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ပြောပြပါမည်။
2 in 1 ဖုန်စုပ်စက်
ဒါတွေက ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့ ရိုးရာဖုန်စုပ်စက်တွေပါ။ ဤသဘောအရ ၎င်းတို့သည် ဂန္ထဝင်ဒီဇိုင်းနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ နည်းပညာတွေ အများကြီးတိုးတက်လာပေမယ့် များသောအားဖြင့် သူတို့က ပိုခေတ်မီပြီး အစွမ်းထက်ပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် မျက်နှာပြင် အမျိုးအစားအားလုံးတွင် ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သော မော်ဒယ်များဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖုန်စုပ်အိမ်ဖုန်မှုန့်သာမက ဖုန်မှုန့် အမျိုးအစားအားလုံးကိုပါ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤဖုန်စုပ်စက်များသည် တံမြက်စည်းပုံသဏ္ဍာန်ကို အတုယူရန် ထင်ရှားသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ဒေါင်လိုက်နှင့် ရှည်လျားသည်။ ၎င်းတို့သည် အများအားဖြင့် ဘက်ထရီအားသုံးထားပြီး သမားရိုးကျ ဖုန်စုပ်စက်ထက် အနည်းငယ် အစွမ်းထက်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ပေါ့ပါးပြီး စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော နှင့် ၎င်းတို့၏ ကောင်းမွန်သော မျက်နှာပြင်ကုသမှုအတွက် ထင်ရှားသော်လည်း၊
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အများအပြားရောက်ရှိနေသော အတန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရမည့် ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပြီး စက်ရုပ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အိမ်သန့်ရှင်းရေးကို ဂရုစိုက်ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အလွန်အဆင်ပြေသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဘက်ထရီများဖြင့် အလုပ်လုပ်ကြပြီး ပန်းကန်ပြားပုံစံဖြင့် ၎င်းတို့၏ လုံးဝန်းသောပုံသဏ္ဍာန်အတွက် အမြဲထင်ရှားသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် သမားရိုးကျ ဖုန်စုပ်စက်ထက် သိသိသာသာ ပိုစျေးကြီးသည်။
၎င်းတို့သည် သင့်လက်ထဲတွင် သက်တောင့်သက်သာ ကိုင်ထားနိုင်သော သေးငယ်သည့် ဖုန်စုပ်စက်များဖြစ်သည်။ ကားထိုင်ခုံ သို့မဟုတ် ဆိုဖာကဲ့သို့သော သာမန်ဖုန်စုပ်စက်သည် မရောက်နိုင်သော ထောင့်များသို့ ရောက်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော၊ အလေးချိန်အနည်းငယ်သာရှိပြီး ၎င်းတို့၏စျေးနှုန်းသည် အများအားဖြင့် အလွန်ချိုသာသည်။ အချို့သော ဖုန်စုပ်ချောင်းများတွင် တပ်ဆင်ထားသော လက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက်များ ပါလာပါသည်။
ဆိုင်ကလုန်း ဖုန်စုပ်စက်များကို ကြည့်ပါ။
Cyclonic ဖုန်စုပ်စက်များသည် စုပ်ယူမှုစွမ်းအားကို တိုးမြှင့်ပေးသည့် လေဘွေများကို ဖန်တီးပေးကာ အညစ်အကြေးများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ခွဲထုတ်နိုင်စေရန်အတွက် ထင်ရှားသည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ထိရောက်မှု မဆုံးရှုံးပါဘူး။.
ဤဖုန်စုပ်စက်အမျိုးအစားများသည် မီးဖိုများ၊ အသားကင်များ သို့မဟုတ် ပြာများစုပုံလာစေသည့် အခြားလုပ်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများမှ ပြာများကိုစုပ်ယူရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ဖုန်မှုန့်များနှင့် အညစ်အကြေးများကို စုပ်ယူနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ပိုမိုတိကျသော အသုံးပြုမှုရှိသည်။ သို့သော် ၎င်း၏ အဓိကတာဝန်မှာ ပြာ သို့မဟုတ် လွှစာများကို ဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။
2-in-1 ဖုန်စုပ်စက်များကို ကြည့်ပါ။
ဤအရာများသည် ပင်မဖုန်စုပ်စက်နှင့် လက်ကိုင်တစ်လုံးကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသည့် ဖုန်စုပ်စက်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ယေဘုယျအားဖြင့် လက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော တံမြက်စည်းမော်ဒယ်များဖြစ်သည်။ ဒါမှ တစ်အိမ်လုံးကို ပိုတိကျအောင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်တွင် ကြမ်းပြင်အတွက် ဖုန်စုပ်စက်နှင့် ဆိုဖာများ သို့မဟုတ် လူသုံးနည်းသော ထောင့်များကဲ့သို့သော နေရာများအတွက် နောက်တစ်ခုရှိသည်။
အိတ်မပါသော ဖုန်စုပ်စက်များကို ကြည့်ပါ။
၎င်းသည် တံဆိပ်အများစုတွင်တွေ့မြင်ရသော ဖုန်စုပ်စက်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အညစ်အကြေးများ သိမ်းဆည်းသည့် ရိုးရာအိတ်များ ထားရှိမည့်အစား ၎င်းတို့တွင် ဖယ်ရှားနိုင်သော ကွန်တိန်နာတစ်ခု ရှိသည်။ ဒီနည်းနဲ့ ဖြည့်လိုက်တာနဲ့ တိုင်ကီကို ထုတ်ပြီး ရှင်းပစ်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် အိတ်တွေပေါ်မှာ ပိုက်ဆံမကုန်ဘူး။ ထို့အပြင် ဤသိုက်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
ဖုန်မှုန့် သို့မဟုတ် ပိုးမွှားများနှင့် ဓာတ်မတည့်မှုပြဿနာရှိသူများအတွက် အထူးသင့်လျော်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်ထူးခြားသော ဖုန်စုပ်စက်အမျိုးအစားကို ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် ခွင့်ပြုသော်လည်း ၎င်း၏ ရေစစ်စစ်ကြောင့် လေထုကိုလည်း သန့်စင်စေပါသည်။ ၎င်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အိမ်တွင်းကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးပြီး လေဝင်လေထွက်ကို တတ်နိုင်သမျှ သန့်ရှင်းအောင် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
ဤဖုန်စုပ်စက်အမျိုးအစားများသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးနေရာများ၊ ဟိုတယ်များ သို့မဟုတ် စားသောက်ဆိုင်များ သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များတွင် ပိုမိုသန့်ရှင်းရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အရာခပ်သိမ်းကို စုပ်ယူနိုင်သော ကြီးမားသော စွမ်းအားရှိခြင်းကြောင့် ထင်ရှားသည်။ ဤစွမ်းအားကြောင့်၊ ပိုမိုထိရောက်ပြီး ထိရောက်သော သန့်ရှင်းရေးကို ရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်တွင်းအသုံးပြုမှုသည် ၎င်းကို အခွင့်ကောင်းယူရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။
အကောင်းဆုံး ဖုန်စုပ်စက် အမှတ်တံဆိပ်များ
ဖုန်စုပ်စက်အသစ်ရှာတဲ့အခါ တံဆိပ်ကို အများကြီးကြည့်တယ်။ တခါတရံတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ရှိပြီးသား အမှတ်တံဆိပ်၏ မော်ဒယ်လ်တစ်မျိုးကို ဝယ်ယူလိုခြင်း သို့မဟုတ် လူသိများသော အမှတ်တံဆိပ်များကို လောင်းကြေးထပ်ခြင်းမျိုး ဖြစ်နိုင်သည်။ သံသယမရှိဘဲ၊ အမှတ်တံဆိပ်သည် အကြိမ်များစွာတွင် သြဇာကြီးမားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေဘူယျအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သိသော သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရသော အမှတ်တံဆိပ်များကို ရွေးချယ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖုန်စုပ်စက်အမျိုးအစားကို အထူးပြုသော အချို့သော ယနေ့ခေတ်တွင် အမှတ်တံဆိပ်များ၏ ရွေးချယ်မှုသည် အလွန်ကျယ်ပြန့်ပါသည်။
၎င်းသည် ထူးချွန်ထက်မြက်သော လေဟာနယ်စက်ရုပ်များ၏ ထုတ်လုပ်သူအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ဘယ်သူလဲမသိဘူး။ roomba ဖုန်စုပ်စက်? သူတို့က 25 နှစ်လောက်စျေးကွက်ထဲမှာရှိပြီ, ဒါကြောင့်သူတို့ကအတွေ့အကြုံကောင်းရှိသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့၏ စက်ရုပ်များသည် များသောအားဖြင့် အဆင့်မြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးဆောင်သည့် စက်ရုပ်များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်ကို ရှာဖွေနေပါက ၎င်းသည် သင်ရွေးချယ်သင့်သည့် အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်မှာ သေချာပါသည်။
စျေးကွက်တွင်လူသိများသောအမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခု။ နှစ်များတစ်လျှောက် အတွေ့အကြုံကောင်းများရှိသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ၎င်း၏မော်ဒယ်များသည် အရည်အသွေးနှင့် သင့်လျော်သောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အာမခံချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖုန်စုပ်စက် အမျိုးအစားများစွာကို သမားရိုးကျ စွတ်ဖားမှသည် တံမြက်စည်းအထိ၊ လက်နှင့်2in 1 အချို့ကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ အကောင်းဆုံး မော်ဒယ်များကို ဤနေရာတွင် ရှာဖွေလိုက်ပါ။ Rowenta ဖုန်စုပ်စက်.
သုံးစွဲသူအများစုသိကြသည့် အခြားအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အရည်အသွေးနှင့်လည်း တူညီသည်။ ၎င်းတို့သည် စျေးကွက်တွင် ကျယ်ပြန့်သော အတွေ့အကြုံရှိပြီး စားသုံးသူများ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို ရရှိထားသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ကုန်ပစ္စည်းကို ရှာဖွေမည်ကို သိသောကြောင့် လူအများက လောင်းကြေးထပ်သည့် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖုန်စုပ်စက် အမျိုးအစားပေါင်းများစွာ (တံမြက်စည်း၊ ထရပ်၊ လက်ကိုင်၊ စက်မှုလုပ်ငန်း...) ကို ဤနေရာတွင် သင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ Bosch ဖုန်စုပ်စက်များ အသုံးပြုသူများနှစ်သက်သည်။
နာမည်က တော်တော်များများနဲ့ ရင်းနှီးတယ်လို့ မထင်ရပေမယ့် ကဏ္ဍမှာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ။ ထို့အပြင်၊ karcher ဖုန်စုပ်စက်များ ၎င်းတို့သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြဲပေးစွမ်းနိုင်သော အလွန်အစွမ်းထက်သော ဖုန်စုပ်စက်များ ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ထင်ရှားသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် ပါဝါသည် အဓိကအချက်ဖြစ်သည့် ဖုန်စုပ်စက်ကို ရှာဖွေနေပါက ၎င်းသည် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အမျိုးအစားများစွာ (စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ပြာ၊ ကား၊ sledge ...) ကို ထုတ်လုပ်သည်။
စားသုံးသူအများစု သိကြတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့် ၎င်းသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ထင်ရှားသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် dyson ဖုန်စုပ်စက် ဝယ်ပါ။ ဖုန်စုပ်စက်ကို ရှာဖွေသည့်အခါတွင်လည်း အာမခံချက်နှင့် ဘေးကင်းသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဖုန်စုပ်စက် အမျိုးအစားအမျိုးမျိုး (လက်ထစ်၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ လက်၊ တံမြက်စည်း...) ကို ထုတ်လုပ်သည်။
သော်လည်း ecovacs ဖုန်စုပ်စက်များ ၎င်းတို့သည် အတော်လေး အသစ်ဖြစ်သည်၊ အမှန်တရားမှာ ၎င်းတို့၏ လမ်းညွှန်စနစ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုစျေးနှုန်းများသည် ၎င်းတို့အား စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်ကို ရှာဖွေနေသူများအတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာစေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သင်တစ်ဦးကို ၀ ယ်ရန်စိတ်ဝင်စားပါက၊ ဤကုမ္ပဏီ၏မော်ဒယ်များကိုကြည့်ရှုရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
ဖုန်စုပ်စက်ဝယ်သောအခါတွင် သင်သည် အသေးစိတ်အချက်အလတ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မော်ဒယ်မှားဝယ်မည်ကို မကြောက်ဘဲ ပိုမိုတိကျစွာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည်။ သို့သော်၊ ၎င်းတို့အားလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည့်အရာကို အချိန်တိုင်းစဉ်းစားရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤအရာအားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေမှုကို ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ဖုန်စုပ်စက်ကို သင့်အိမ်အတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတစ်ခုအဖြစ် စဉ်းစားရန် အရေးကြီးသောကြောင့်၊ သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီသော ကုန်ပစ္စည်းကို သင်မဝယ်ချင်ပါ။
ဖုန်စုပ်စက်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် အလွန်အရေးကြီးသည့် နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်မှာ ပါဝါဖြစ်သည်။ ဖုန်စုပ်စက်၏ သတ်မှတ်ချက်များကို ဖတ်လိုက်တိုင်း ပါဝါကို ညွှန်ပြသည်ကို တွေ့ရပါမည်။ အဲဒါကို တိုင်ပင်ဖို့ အရေးကြီးပေမယ့် အဲဒီနံပါတ်ကို ညွှန်ပြဖို့ လိုပါတယ်။ မော်ဒယ်တစ်ခုက ပိုအားကောင်းသလားဆိုတာ အမြဲတမ်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။
စာရွက်ပေါ်တွင် ပါဝါနည်းသော မော်ဒယ်များ ရှိပြီး လက်တွေ့တွင် ၎င်းတို့ ပိုကောင်းစေရန် နှစ်သက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းတို့သည် အများအားဖြင့် ပါဝါအကြောင်း ဖော်ပြသည့် အရေအတွက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းသည် ကောင်းမွန်သော်လည်း ၎င်းကို ၎င်းတို့၏ စစ်မှန်သော စွမ်းအား၏ ညွှန်ပြမှုအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ ယူရမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ဝင်စားသည်မှာ ဖုန်စုပ်စက်သည် အစွမ်းထက်သည်။ ဤနည်းဖြင့် အိမ်တွင် စုပုံနေသော ဖုန်မှုန့်များနှင့် ဖုန်မှုန့်များကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ သက်တောင့်သက်သာဖြင့် အပြီးသတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အလွန်အစွမ်းထက်သော ဖုန်စုပ်စက်ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ မလိုချင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် မျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုးကို ကပ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးမှာ၊ ဖုန်စုပ်စက်တွင် ပါဝါထိန်းညှိကိရိယာတစ်ခု ရှိသည်။ ဤနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလိုသော ပါဝါကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ကြိုးတပ်ဖုန်စုပ်စက်များ (ပင်မများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော) များသည် ဘက်ထရီပါဝါသုံးပစ္စည်းများထက် ပိုမိုအားကောင်းသည်။ ဒါကြောင့် အသေးစိတ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီအားသုံး ဖုန်စုပ်စက်များသည် ကောင်းစွာစုပ်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ပိုကောင်းသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ဒါပေမယ့် ဒါကို သတိပြုမိပြီး ဒီအသေးစိတ်အချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ အရေးကြီးတယ်။
ဖုန်စုပ်စက်တစ်လုံးကို အခြားတစ်ခုထက် ဖုန်စုပ်စက်ရွေးချယ်ရာတွင် များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည့် အခြားအသေးစိတ်အချက်များရှိပါသည်။ ဤအရာများသည် ပါဝါ သို့မဟုတ် အမှတ်တံဆိပ်ကဲ့သို့ အရေးပါမှု မရှိနိုင်သည့် ရှုထောင့်များ ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် ဆုံးဖြတ်ချက် လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် သြဇာသက်ရောက်မှု ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ကို မှတ်သားထားရန် အရေးကြီးပါသည်။
မောင်းနှင်နိုင်မှုနှင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုတို့သည် အရေးကြီးပါသည်။ အိမ်ကို အချိန်တိုင်း သက်တောင့်သက်သာ ရွေ့လျားနိုင်စေချင်တယ်။ ဖုန်စုပ်စက် (သို့) အလွန်လေးလံနေအောင် ဆွဲယူစရာမလိုပါ။ ဒါကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေချိန်မှာ ထိပ်ဖျားမဖြစ်စေပါဘူး။ ထို့ကြောင့် ဤအမျိုးအစားများကို စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာက အရင်ထက်စာရင် ပိုခက်ခဲမှာမို့လို့ပါ။
ဖုန်စုပ်စက်၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် သန့်ရှင်းရေးသည် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ အချိန်အများကြီး ပေးစရာမလိုတဲ့ အရာတစ်ခုကို လိုချင်တာကြောင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အပ်ငွေတစ်ခုရှိလျှင်၊ မော်ဒယ်အများစုတွင်၊ သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှာ ရိုးရှင်းပါသည်။ အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ တိုင်ကီကို ရှင်းထုတ်ပြီး ရေစွတ်လိုက်ပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်သာကြာသည့် ရိုးရှင်းသောအလုပ်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အိတ်များဝယ်ရန် မလိုအပ်သောကြောင့် သိမ်းဆည်းပါသည်။
မော်ဒယ်အများအပြားတွင် မီးလင်းခြင်းနှင့် ဘက်ထရီအချက်ပြခြင်းများ ရှိသည်။ ဤအရာများသည် ဖုန်စုပ်စက်ကို ပိုမိုထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်သည့် နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အပြုသဘောဆောင်ပြီး အသုံးဝင်သော ရှုထောင့်များဖြစ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ မဟုတ်သော်လည်း မဆုံးဖြတ်သင့်ပေ။ အနည်းဆုံးတော့ ဖုန်စုပ်စက်ရဲ့ စျေးက ပိုမြင့်တယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကြိုးတပ်ဖုန်စုပ်စက်ဝယ်သည့်ကိစ္စတွင် နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်မှာ ကြိုး၏အရှည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အလွန်တိုတောင်းပြီး သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ချိန်တွင် သင့်အား ကန့်သတ်ချက်များစွာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခန်းပြောင်းတိုင်း ပလပ်ပြန်ဖြုတ်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် ကြိုးရှည်တစ်ခုဟာ လက်တွေ့မှာ ပိုအဆင်ပြေတဲ့ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပါ။
ယနေ့ခေတ် ဖုန်စုပ်စက်များတွင် ဇကာများရှိသည်။ Filter အမျိုးအစားသည် များစွာသော ဂရုမစိုက်သော အရာဖြစ်သည်၊ သို့သော် ၎င်းသည် အလွန်အရေးကြီးသော အသေးစိတ်အချက်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် ငွေကြေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွင် သိသာထင်ရှားသော ခြွေတာမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေနေသော ဖုန်စုပ်စက်တွင် စစ်ထုတ်သည့် အမျိုးအစားကို စစ်ဆေးရန် အရေးကြီးပါသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် အသုံးအများဆုံးမှာ HEPA စစ်ထုတ်ခြင်း ပါရှိသည်။ ၎င်းသည် filter အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အညစ်အကြေးများစွာကိုစုပ်ယူသည်။ ဒါပေမယ့်လည်း အလွယ်တကူ သန့်စင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချိန်အကြာကြီး ဆက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ ဤ filter အမျိုးအစားကိုသန့်ရှင်းရန်နည်းလမ်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသည်။ ရေစို၊ ခြောက်အောင်ထားပြီး ဖုန်စုပ်စက်ထဲမှာ ပြန်ထည့်ထားရပါမယ်။ ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ရေကဲ့သို့ ဖုန်စုပ်စက်အမျိုးအစားအချို့တွင် အပြာရောင်အလင်းစစ်ထုတ်စက်များလည်းရှိသည်။ ၎င်းတို့ကိုလည်း သန့်စင်နိုင်ပြီး စုပ်ယူမှု မြင့်မားသည်။ လေထုကို သန့်စင်ပေးတဲ့အပြင် သို့သော် ၎င်းတို့သည် အချို့သော အလွန်တိကျသော ဖုန်စုပ်စက်အမျိုးအစားများအတွက် ကန့်သတ်ထားသည်။
အခြားသော ဖုန်စုပ်စက်များတွင် HEPA လက်မှတ်မရသော စစ်ထုတ်မှုများ ရှိသည်။ ဤစစ်ထုတ်ခြင်းအမျိုးအစားကို သန့်စင်၍မရပါ၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့အား အခါအားလျော်စွာ ပြောင်းလဲခိုင်းပါသည်။ သုံးစွဲသူတွေအတွက် အဆင်မပြေတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ထို့အပြင်၊ ကိစ္စများစွာတွင် မလိုအပ်သော ငွေဖြုန်းခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဖုန်စုပ်စက်တွင် ပါရှိသည့် filter အမျိုးအစားကို တိုင်ပင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သန့်စင်ပေးနိုင်တဲ့ Filter က ကျွန်တော်တို့အတွက် အဆင်ပြေဆုံးပါ။
ယုတ္တိဗေဒအရ၊ စျေးနှုန်းသည် သုံးစွဲသူများအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည့် အသေးစိတ်အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘတ်ဂျက်ပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကန့်သတ်ချက်အချို့ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့မတတ်နိုင်သော မော်ဒယ်များလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အထူးသဖြင့် အချို့သော ဖုန်စုပ်စက် အမျိုးအစားများတွင် ကျွန်ုပ်တို့ လက်လှမ်းမီနိုင်သော မော်ဒယ်များကို သိရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။
စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်ကို သင်ရှာနေပါက၊ စျေးနှုန်းများသည် ပုံမှန်မော်ဒယ်များထက် ပိုများပါသည်။ များစွာသောကိစ္စများတွင် ယူရို 400 ထက်ကျော်သည်။ ယူရို 200 ကျော်သာရှိသော မော်ဒယ်များ ရှိသော်လည်း၊ ဒါကြောင့် ရေရှည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဖြစ်တဲ့အတွက် ရေရှည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာစဉ်းစားဖို့တော့ အရေးကြီးပါတယ်။
စျေးနှုန်းအားလုံး၏ပုံမှန်ဖုန်စုပ်စက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးကောင်းမွန်မှုကိုပေးဆောင်သည့် ယူရို 80-90 ခန့်မှ ဖုန်စုပ်စက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အသုံးအများဆုံးမှာ ၎င်းတို့သည် ယူရို 100 ထက်ပို၍ ကုန်ကျသော်လည်း ယူရို 100 နှင့် 200 ကြားတွင် မော်ဒယ်အများစုကို စျေးကွက်တွင် တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးမျိုးရှိသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ ပို၍ သက်တောင့်သက်သာ ရွေ့လျားနိုင်သော အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။
မင်းကို ဘယ်အရာကမှ ယုံမှာမဟုတ်ဘူး?
သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာနှင့် လိုက်ဖက်သော ဖုန်စုပ်စက်ကို သင်ရှာမတွေ့ပါက၊ အောက်ပါ ထုတ်ကုန်များ၏ ရွေးချယ်မှုတွင် ၎င်းကို သင်တွေ့လိမ့်မည် သေချာပါသည်။
ရှိရှိသမျှ ဖုန်စုပ်စက်အားလုံးကို ရှာဖွေပါ 🙂
စက်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် စိုစွတ်သော ဖုန်စုပ်စက်များကဲ့သို့ အချို့သော ပိုမိုတိကျသောအမျိုးအစားများအတွက် စျေးနှုန်းများသည် များသောအားဖြင့် အတန်ငယ်ပိုမြင့်ပါသည်။ ကြီးကြီးမားမား ကွဲပြားမှုတွေ မရှိပေမယ့်။ သို့သော် အနာဂတ်တွင် မနှစ်မြို့ဖွယ် အံ့သြဖွယ်ရာများကို ရှောင်ရှားရန် သင်ဘာဖြစ်လာမည်ကို သိရန် အရေးကြီးသည်။ ကောင်းမွန်သောအချက်မှာ အမှတ်တံဆိပ်များသည် တတ်နိုင်သော မော်ဒယ်များကို ပိုများလာစေသည်။ သို့မှသာ အသုံးပြုသူအားလုံး ၎င်းတို့အား ဝင်ရောက်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သင်အလိုရှိသည့်အရာမှာ သင့်ဖုန်စုပ်စက်အသစ်ကို ဝယ်ယူခြင်းတွင် သက်သာစေမည်ဆိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်ကောင်းမွန်သောကမ်းလှမ်းမှုများကို တွေ့ရှိနိုင်သည့် တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ဖြစ်ရပ်များရှိပါသည်။ ဤနေ့ရက်အချို့မှာ-
Black Friday အတွက် ဖုန်စုပ်စက်
Cyber ​​​​Monday အတွက် ဖုန်စုပ်စက်
ဖုန်စုပ်စက်များတွင် Prime Day
ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စျေးကွက်တွင် စျေးပေါသော ဖုန်စုပ်စက်များကို တွေ့ရှိရသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ယူရို 60 ခန့်မှစတင်သောစျေးနှုန်းများရှိသည်။ သို့သော် အများစုသည် များသောအားဖြင့် ယူရို 100 နှင့် 200 ကြားတွင် ရှိသည်။ ကောင်းသောအချက်မှာ ယနေ့ခေတ် ဖုန်စုပ်စက်များ၏ အရည်အသွေးသည် မြင့်မားသည်။ ထို့ကြောင့် ယူရို 100 အောက် စျေးနှုန်းရှိသော မော်ဒယ်များပင်လျှင် သင့်အား ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Prime Day ဖုန်စုပ်စက်များ
Cyber ​​Monday ဖုန်စုပ်စက်များ
black Friday ဖုန်စုပ်စက်များ
စျေးပေါသော ဖုန်စုပ်စက်များ 2022 - သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ - ကွတ်ကီးများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များ